यस्ता छन् घरमै बसी सजिलै गोरो बन्ने उपाय - Nawalpur Dainik
छा’लाले शरीरको पूरै भाग ढाकेर राखेको हुन्छ । ग’र्मीयाममा सूर्यको किरण निकै तेजिलो हुने भएकाले शरीरको खुला भागमा सन बर्न हुने, दाग बस्नेलगायतका स’मस्या आउन सक्छन् । त्यसैगरी अहिले सहरको धुलो र धुवाँले गर्दा छा’लामा धेरै असर पर्नसक्छ । धुलोले गर्दा छा’ला चिलाउने र गहिरो घाउ बनेर दागसमेत बस्ने सम्भावना हुन्छ । छा’लाले शरीरको पूरै भाग ढाकेर राखेको हुन्छ । गर्मीयाममा सूर्यको किरण निकै तेजिलो हुने भएकाले श’रीरको खुला भागमा सन बर्न हुने, दाग बस्नेलगायतका स’मस्या आउन सक्छन् । त्यसैगरी अहिले सहरको धुलो र धुवाँले गर्दा छा’लामा धेरै असर पर्नसक्छ । धुलोले गर्दा छाला चिलाउने र गहिरो घाउ बनेर दागसमेत बस्ने सम्भावना हुन्छ ।
गर्मीयाममा शरीरमा पानीको मात्रामा कमी हुने गर्छ। यही कारणले गर्दा छा’लामा चाउरी पर्ने र छालाको चमकसमेत हराउँदै जान्छ । यस्तो अवस्थामा जति नै महँगा सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्री प्रयोग गरे पनि फाइदा नहुन सक्छ । त्यसैगरी पार्लरमा गएर छा’लाको उपचार गराउँदा क्षणिक राम्रो देखिए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा कुनै फाइदा नहुने देखिन्छ । त्यसैले जाडो होस् या गर्मी, आफ्नो छालालाई घरमै नियमित हेरचाह गर्‍यो भने छाला स्व’स्थ र चम्किलो हुन्छ । महँगा सौन्दर्य सामग्रीले गर्न नसक्ने काम घरमै पाइने विभिन्न सामग्री र त्यसबाट बनाइएका घरेलु प्याकले गर्न सक्छ । अनुहार गोरो बनाउन विभिन्न घरेलु प्याकहरू बनाउन सकिन्छ ।
बदाम प्याक: मधेसी बदामका केही दानालाई रातभरि पानीमा भिजाउने । भोलिपल्ट बिहान बदामलाई पिसेर मसिनो बनाउने । त्यसमा थोरै दूध हालेर लेदो बनाउने । उक्त लेदोलाई अनुहारमा लगाएर १५ मिनेटजति पखाल्ने । यसले अनुहारको छालालाई पोषण प्राप्त भई छाला सुन्दर र चम्किलो हुन्छ । तुलसीको प्याक: तुलसीको प्याक सूर्यको हानिकारक किरणबाट छालामा पर्ने नकरात्मक प्रभाव कम गर्न लाभदायक मानिन्छ । तुलसीको पातलाई राम्रोसँग पिसेर त्यसको लेदोलाई अनुहारमा दलेको केही बेरपछि मनतातो पानीले अनुहार पखाल्नु पर्छ ।
पुदिना प्याक: पुदिनाका पातलाई टिपेर राम्रोसँग पिस्ने । त्यसपछि यस लेपमा बेसारको धुलोलाई मिसाउने । अनुहारलाई मनतातो पानीले धोएर त्यसमा पुदिनाको लेप लगाउने । करिब १५ मिनेटजति त्यत्तिकै राखेपछि चिसो पानीले अनुहार पखाल्दा ताजापन महसुस हुन्छ ।काँक्रोको प्याक: काँक्रो खाँदा स्वा’स्थ्यका लागि जति फाइदाजनक हुन्छ, यसको गुदी पनि त्यतिकै लाभदायक हुन्छ । काँक्रोको गुदी निकालेर लेदो बनाई अनुहारमा दलेर दस मिनेटजति त्यत्तिकै राखेर चिसो पानीले अनुहार पखाल्नु पर्छ । यसले पनि ताजापनको अनुभूती गराउनुका साथै छा’लामा चमक दिन्छ ।
गोलभेडा प्याक: गोलभेडाको गुदीमा एक चम्चा मह मिसाएर अनुहारमा लगाउने । करिब १० मिनेटपछि त्यसलाई सफा पानीले पखाल्ने । यो प्याक तैलीय छालाका लागि उत्कृष्ट हुन्छ । सूर्यका हानिकारक किरणको अ’सर स्वरूप छालामा देखा पर्ने सन बर्न र दागहरू हटाउन यो प्याकले सहयोग पुर्‍याउँछ । केराको प्याक: एउटा सिंगो केराको आधा भागमात्रै लिने र त्यसलाई एउटा कचौरामा हालेर राम्रोसँग मिच्ने । त्यसमा एक चम्चा मह र दुई चम्चा क्रिम हालेर राम्रोसँग फिट्ने । यस प्याकलाई अनुहारमा लगाएको १० मिनेटपछि चिसो कपडाले पुछ्ने ।
मेवाको प्याक: प्रायः सबै फलफूलका प्याक अनुहारमा लगाउँदा फाइदाजनक हुन्छ। राम्रोसँग पाकेको मेवालाई पिसेर त्यसको लेपलाई अनुहारमा लगाउने । केही बेर राखेर सुकेपछि मन तातो पानीले अनुहार पखाल्ने । अन्डा प्याक: अन्डाको सेतो भागमा आधा चम्चा कागतीको रस हालेर राम्रोसँग फिट्ने । यस लेपलाई अनुहारमा लगाएको २० मिनेटपछि सफा पानीले अनुहार पखाल्ने गर्नुपर्छ ।
जौको प्याक: जौको पीठो र दही मिसाएर बनाइएको प्याकलाई अनुहारमा लगाउने । करिब आधा घन्टापछि मनतातो पानीले अनुहार पखाल्नाले छाला सुक्खा हुने स’मस्याबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । बेसन प्याक: महलाई मनतातो बनाएर बेसनको पीठोमा मिसाउने । यो मि श्रणलाई अनुहारमा लगाएर २० मिनेटजति राखेपछि चिसो पानीले पखाल्ने । यी प्याकको प्रयोगबाहेक नियमित रूपमा छालालाई सफा पानीले पखाल्ने गर्नाले पनि छाला स्वस्थ हुन्छ। बजारमा पाइने जस्तो पायो त्यस्तै फेस वास लिएर प्रयोग गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन । अनुहारमा रहेका मृ’त छाला हटाउन सातामा एकपटकजति स्क्रब प्रयोग गरेमा छाला सुन्दर र चम्किलो हुँदै जान्छ ।
Prevदादको स’मस्याबाट है’रान हुनुहुन्छ ? यसरी पाउनुहोस् घरेलु उपायबाट छुट’कारा
Nextनाकमा चि’ल्लो तथा काला वा सेता खि’ल आएर चि’न्तित हुनुभएको छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्